Ciidamada Dawlada Somaliya oo la waregay Deegaano hor leh kuna sii jeeda Afgooye | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Ciidamada Dawlada Somaliya oo la waregay Deegaano hor leh kuna sii jeeda Afgooye
Share24.May.2012:- Wararka aan ka helayno Dagaalada ay Ciidamada Xooga Dalka Somaliya oo taageero ka helaya kuwa Midowga Afriak ee AMISOM ay ka wadaan duleedka Muqdisho islamarkaana ay ku baacsanayaan xoogaga Alshabaab ayaa isi soo daraya.
Saraaakiisha Ciidamada Xooga Dalka Somaliya oo warbaahinta qaar waraysiyo siiyay ayaa sheegay in iminka ay kusii siqayaan deegaano hor leh islamarkaana ay gaabiga ku hayaan Dagmada Afgooye.
Ciidamada ayaa wacad ku maray in ay gacanta ku dhigayaan mudo gooban gudaheed Dagmada Afgooye ee deegaanka laanta Buuro islamarkaana aysan ka harayn Alshabaab.
Wararka aan helayno ayaa inoo xaqiijinaaya in Ciidamada Dawlada ay iminka Howlgalo ka wadaan deegaanada loo barakacay ee Duleedka Muqdisho sida: Tareedisho,Ceelasha Biyaha Lafoole iyo Carbiska islamarkaana haatan ay kusii siqayaan Dagmada Afgooye.
Xoogagaii Alshabaab ee ku sugnaa deegaanadaasi ayaa isaga cararay halkaasi waxayna wararku intaasi raacinayaan inay u jihaysdeen dhanka Afgooye.
Waxii warar ah ee Kusoo Kordha kala Soco Star Fm.